डनवाद र धनवादका पर्याय, नोबेल अस्पतालका सञ्चालक सुनिल शर्मा (श्रृंखला १ ) | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
मोरङ । यतिबेला देशमा यदि कसैको चर्चा छ भने त्यो सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएका ब्यत्ति हुन आफुलाई डाक्टर भन्न रुचाउने सुनिल शर्मा । मोरङको क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका शर्मा बिराटनगरमा सञ्चालित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन । उनी नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हुन । उनले केही दिनअघि मेडिकल कलेजमा राजीनामा दिएको हल्ला मात्र चलाएनन । उनले कलेजका नामबाट जिल्लाका बिभिन्न क्षेत्रमा निशुल्क भनी सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य शिबिर समेत आईतबार सम्म सञ्चालनमा थियो । निर्बाचन आचारसंहिता बिपरित भएको भन्दै उनको शिबिर आईतबार बाटै रोकिएको छ ।
को हुन शर्मा ?
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोरंङ क्षेत्र नं ९ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार वर्षमान पुनलाई जिताउन नेपाली काँग्रेस मोरंङका सभापति डिगबहादुर लिम्वुलाई पराजित गर्न लागेको कसैले भुलेको छैन । माओवादी आन्दोलनको एउटा कालखण्डमा नेपाली काँग्रेस निकट मोरङ इटहराका कृष्ण बैठाको सफायादेखि, शान्तिप्रक्रियापछि माओवादीमै संलग्न भएर डा. ज्ञानेन्द्र गिरीमाथिको मारपीट काण्ड, आफ्नै अस्पताल परिसरमा बम राखेर आफ्नै साझेदार डा.ज्ञानेन्द्र कार्की तर्साउनेसम्म योजनाका सफल योजनाकारका रुपमा उनलाई चिन्ने धेरै छन ।
माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार वर्षमान पुनलाई जिताउन नेपाली काँग्रेस मोरंङका सभापति डिगबहादुर लिम्वुलाई पराजित गर्न लागेको कसैले भुलेको छैन । माओवादी आन्दोलनको एउटा कालखण्डमा नेपाली काँग्रेस निकट मोरङ इटहराका कृष्ण बैठाको सफायादेखि, शान्तिप्रक्रियापछि माओवादीमै संलग्न भएर डा. ज्ञानेन्द्र गिरीमाथिको मारपीट काण्ड, आफ्नै अस्पताल परिसरमा बम राखेर आफ्नै साझेदार डा.ज्ञानेन्द्र कार्की तर्साउनेसम्म योजनाका सफल योजनाकारका रुपमा उनलाई चिन्ने धेरै छन ।
शर्माको डा.को प्रमाणपत्र समेत नक्कली भएको बताईन्छ । मोरङको लेटाङमा पढको शर्माको बिद्यार्थीकालको नाम अर्को र डा. भएपछि अर्को नाम हुँदा धेरैले उनको पढाईमा समेत शंका गरेका छन । उनको अस्पताल बिवादमा आईरहन्छ कहिले कर नतिरेको त कहिले चिट चोराएर बिद्यार्थी उर्तिण गराएको । अख्तियारको निशानामा समेत परेका शर्मा लामो समय बिदेशमा लुकेर बसेपछि सेटिङ मिलाएर नेपाल फर्किएका हुन ।
कसरी लिए टिकट काँग्रेससँगको हेलमेल लामै भएपनि पछिल्लो तीन वर्षयता सुनिल पार्टीमा सक्रिय थिए । महासमिति सदस्य जित्न उनले गाउँका सबै कुखुरा उठाई दिएको हल्ला गजबले काँग्रेस वृत्तमा चर्चा नै चलेको थियो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसँगै काँग्रेस नेताहरुले मोरङको क्षेत्र नम्बर ३ मा एमाले अगाडी रहेकोले उमेदवारी दिने मनसाय राखेनन् । उसैबेला शर्मा पड्कीए–त्यहाँ के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ । उनले २० करोड रुपैँया खर्चेर मतदाता किन्ने योजना सुनाए । त्यसपछि उनैलाई टिकट काँग्रेसले दिइएको काँग्रेस निकटको भनाई छ । टिकट पाएपछि शर्माले सुरु गरेको स्वास्थ्य शिविरदेखि अस्पतालमा ल्याएर उपचार गर्नेसम्मको सामाजिक काममा सक्रिय भए ।
कसरी एकलौटी भयो नोबेल नोबेल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन स्वीकृत भईसकेपछि शर्माले लगानीकर्तासँग बार्गेनिङ्ग सुरु गरे । उनले १५ प्रतिशत आफूलाई र १० प्रतिशत शेखर कोइरालालाई शेयर दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । दुवैजनाको शेयर आफ्नै नाममा राख्ने सहमति पनि गरे । एक रुपैँया लगानी नगरेका शर्मा एकाएक अस्पतालका मुख्य शेयरकर्ता जस्तै बने । भौतिक संरचना निर्माणमा अन्य लगानीकर्ता जुटे । शर्मा भने उहि पुरानै नेपाल चाइना कारोबारमा संलग्न भए । त्यतिन्जेलसम्म उनले आफ्नो आर्थिक धरातललाई उकासेका थिए । एमबीबीएस अध्ययन भने चाइनामा गरेनन् । रोमाञ्चक खेल खेल्नसक्ने शर्माले नोबेलका मुख्य लगानीकर्ताहरुबीच दरार सिर्जना खेल्ने भूमिका सुरु गरे ।
शेखरको बुई चढेका उनी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीका नेता वर्षामान पुन र काठमाण्डौं वाईसिएलका नेता सागरको बाक्लो सम्पर्कमा थिए । त्यसैबेला वर्षामानलाई थाहै नदिई डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई शर्माले काठमाण्डौं पुर्याएर सागरमार्फत कुटाए । त्यो घटनाक्रमले भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीलाई असर गर्यो । त्यसपछि शर्माले आफ्नै अस्पताल आफैं बम राख्ने र आफ्नै अर्का साझेदार ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई तर्साउने खेल गरे । त्यसमा समेत उनी सफल भएपछि नोबेल मेडिकल कलेज लगभग आफ्नो बनाए । हाल उनी नोबेलका हर्ताकर्ता हुन । – पुर्बेली न्युजबाट